मःमः को स्वादमा हराउँदै हुनुहुन्छ ? पिठो भित्रको मासुले महामारी निम्त्याउन सक्छ – Mission Khabar
मःमः को स्वादमा हराउँदै हुनुहुन्छ ? पिठो भित्रको मासुले महामारी निम्त्याउन सक्छ
मिसन खबर २२ असार २०७५, शुक्रबार ०६:५३
काठमाडौं– नेपाली होस वा विदेशी अधिकांशले मन पराएको र मेनु नै नहेरी झट्ट माग गरिहाल्ने परिकार हो, मःम । हरेक होटल र रेष्टुराँमा अहिले मःमः बिनाको मेनु नै हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ ।
पछिल्ला वर्षमा लोकप्रिय खाजा बन्दै गएको मःम कति स्वस्थकर छ, यसमा भने कसैको ध्यान पुगेको देखिदैन । हुनत, नेपालीहोस वा विदेशी मःमको जोखिम बारे जानकार छैनन् वा भएर पनि वेमतलब गरिरहेका छन् । अनि त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी खाईने र बेचिने मःम हो, बफ अर्थात् भैँसीको मःम । काठमाडौँका अधिकांश होटल तथा रेस्टुराँको मःम बनाउदै पनि फोहोर मिसिएको हुन्छ । काठमाडौँको सडक किनारका तारे होटलदेखी स्टेट क्याफेसम्ममा पाइने यो खाजा सर्वसाधारण देखि भिआइपी सम्मको रोजाई बन्ने गरेको छ । काठमाडौंमा पनि एकिन रेकर्ड नभएपनि मःमले मात्रै दैनिक करोडौंको व्यपार हुनेगरेको बताइन्छ ।
यसरी सबैको रोजाईमा पर्ने मःमको पिठो भित्र के छ ? मैले कति स्वस्थकर खाईरहेको छु भन्ने कुरामा कोही पनि उपभोक्ता सचेत नहुदा हाम्रो खानपान नै जोखिम बन्दै आएको छ । उपत्यकामा दैनिक हजारौँको संख्यामा खपत हुँने रागा भैसी यसैपनि निरोगी छैनन । त्यसमाथी पनि बधशालाको मःमको पिठो भित्रको जोखिम झल्काउँछ । आधुनिक बधशाला त कहिकत्तै छैनन नै उल्टै पैसा कमाउने लोभ र लालचामा व्यवसायी पर्दा जोखिमयुक्त मासुलाई हामीले मिठो मानेर खाईरहेका छौँ ।
दैनिक डेढ करोड बराबरको मःम बिक्रिहुने आँकलन गरिएको काठमाडौंमा एक महिनामा ४५ करोड बराबरको कारोबार मःमः बाट भैरहेको छ । तर जनस्वास्थ्यमाथीको यो खेलबाड कसैले वास्था गरेको छैन । मःमःबनाउन प्रयोग गरिने मैदा र भित्र राखिएको किमा दुबैबाट मानव स्वास्थ्यमा जोखिम हुन्छ । मैदाको मात्र बढी भएको मःमले ग्यास्ट्रिक, सुगर र मोटोपन जस्ता रोगको जोखिम निम्त्याउँछ । अझ, नियमित ममःखानाले हड्डी तथा मांसपेशीमा नकारात्मक असर पार्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
अझ, खुल्ला ठाउँमा गरिने बध र राँगा भैँसीको मासुमा खुलेआम भेटिने किराको जोखिम कति होला ? भैँसी तथा राँगा काट्ने बधसाला वरिपरि नै गन्हाएर बसि नसक्नुको अवस्था हुनु पक्कै जोखिमयुक्त छ । अनि यहि बधशालाको मासुबाट तयार गरिने मःम कति स्वस्थकर होला ? उपभोक्तासँगै व्यवसायीले पनि मानवस्वास्थ्यका बारेमा देखापर्नसक्ने गम्भिर असर बारे सचेतना अपनाउनुपर्छ । हैन भने सबैको स्वादको रोजाई बनेको मःमले देशको विकटताको साईनो जस्तै बनेको महामारी काठमाडौंमा ननिम्तिएला भन्न सकिन्न ।
क्याटेगोरी : समाचार, होटल / रेस्टुरेन्ट